पोखराको होटलमा पारस र सोनिका ३ दिन सँगै बसेको खुलासा ! - पोखराको होटलमा पारस र सोनिका ३ दिन सँगै बसेको खुलासा ! -
उज्यालो प्रतिनिधि ३० आश्विन २०७६, बिहीबार फोटो समाचार
विभिन्न युवतीसँग नाम जोडिएर पटक पटक विवादमा आइरहने पूर्व युवराज पारस शाहको नाम यस पटक युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकायासँग जोडिएको छ ।
दरवारमार्गस्थित सोनिकको लगानी रहेको लिक्विड लाउन्जमा बाक्लै रुपमा देखिने गरेका पारस पछिल्लो समय पोखरामा सोनिकालाई हार्ले डेबिडसन बाइकको पछाडि राखेर हुँकिएको भिडियो टिकटकमा भाइरल भएको छ ।
यति मात्रै नभएर सोनिकाले बनाएको टिकटकमा मुसुक्क हाँसेर साइड लाग्ने अधवैँसे उनै पारस हुन् । अनि टिकटक खिचिएको दृश्य पोखराको कुनै होटलको भएको बताइएको छ ।
शाहज्यादा, युवराज हुँदै पूर्वयुवराज बनिसक्दा पनि आफ्नै व्यवहारका कारण पारस पटकपटक विवादमा आइरहेका छन् । कहिले प्रहरीलाई कुटेर त कहिले ट्राफिक नियम तोडेकामा गाडी रोक्न खोज्ने ट्राफिक प्रहरीलाई नै किच्न खोज्ने उनको उग्र व्यवहार देखिइनै रहेको छ ।
सुरा र सुन्दरी पनि छुटेको छैन उनको विवादमा । चार वर्ष थाइल्याण्ड बसाईमा उतैकी युवती कनिका चाइसानसँगको प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक भएको थियो ।
कन्निकाले पारस आफ्ना श्रीमान भएको र उनको तर्फबाट एकजना सन्तानसमेत रहेको भन्दै एक बालकको तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । श्रीमती हिमानी शाहसँग उनको ठाकठुक त पुरानै हो । कानुनी रुपमा यी दुबै श्रीमान श्रीमती भए पनि सँगै बस्दैनन् ।
हिमानी निर्मल निवासमा बस्छिन् । पारसलाई निर्मल निवासमा प्रवेश अनुमति छैन । मोडल सोनिकाले अफेयर नभए पनि आफू पारससँग निकट भएको बताएको खबर आज प्रकाशित शुक्रबार साप्ताहिकमा मनोज घर्तीमगर र रीना मोक्तानले लेखेकी छन् ।